Grace Mugabe returns to Zimbabwe despite being wanted by South African police
South African police had issued a "red alert" at borders to ensure she didn't leave undetected.
Updated August 20, 2017 15:09 BST
Update: South Africa granted diplomatic immunity to Zimbabwe's first lady, who was accused of assaulting a woman in a Johannesburg hotel a week ago.
South Africa's foreign minister, Maite Nkoana-Mashabane, granted immunity to Grace Mugabe in a government gazette notice that was published Sunday (20 August).
The notice recognizes "the immunities and privileges of the First Lady of the Republic of Zimbabwe, Dr. Grace Mugabe."
Police on 'red alert' to stop Zimbabwe's First Lady Grace Mugabe leaving South Africa
South African police had issued a "red alert" at borders to ensure she didn't leave undetected and said they were waiting for a government decision on the immunity appeal.
Related topics : Grace Mugabe Robert Mugabe Zimbabwe